Igbo, Tracts, UZI NKE 06 -- Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Jehova Mgbe niile! | Waters of Life
Home -- Igbo -- Tracts -- Tract 06 (Rejoice in the LORD Always!)
UZI NKE 6 - Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Jehova Mgbe niile! (Ndị Filipaị 4:4)
Onye ọ bụla nke na-ele telivishọn ahụ nwere ike ịhụ ndị na-eto eto na-agba ọsọ na-agba egwu, na-arịgo ugwu n'agbanyeghị ihe ize ndụ, na ịgagharị gburugburu ụwa na nnukwu balloons. Ha na-anwa imeju nkpuru obi ha site n'ime ihe na mgbalị onwe onye.
Òtù ọzọ na-eme ka ego nweta nkasi obi, chefuo nsogbu ha ma bie ndụ ndụ nke mmehie na obi ụtọ. Anyị na-ahụ ndị ọzọ na-akwa ákwá n'ihi na ikpe na-ezighị ezi dakwasịrị ha. Ha na-aṅụ iyi na ha ga-abọ ọbọ site n'ịgbawa onwe ha dịka ndị mgbapụta maka mba ha.
Ọ bụ nanị mmadụ ole na ole na-echi gharịkwuru Chineke na-ajụ ya, "Gịnị ka anyị ga-eme ka a zọpụta anyị?" "Gịnị kai chọrọ ka anyị mee nakwa ihe anyị na-ekwesịghị ime?" Ebere Chineke na-agba ndị obi ha tiwara etiwa anya ka ha welite anya ha gaa n'eluigwe iji nweta ezi nkasi obi site n'aka Onye Okike dị nsọ.
Ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ na-akwụ ụgwọ na enweghị olileanya ha na-arịwanye elu, ha enwekwaghị olileanya ma ọ bụ olileanya na ndụ a. Ndị a na-ata ahụhụ hà nwere ike inweta olileanya na nhụsianya ha? Ndi anyi nile na-agba oso na agha agha nuklia, nke nwere ike ibibi otu n'ime ato nke ndi mmadu?
Nkasi obi nkasi obi
N'etiti nchegbu na agha, Nehemaịa onye amụma nụrụ nhụwa Chineke dịka azịza nke ekpere ya, "Unu akwala ákwá, n'ihi na ọṅụ nke Onyenwe anyị bụ ike unu" (Nehemaya 8:10).
Ka anyị bulie obi anyị n'ebe Jehova dị ndụ nọ, n'ihi na ya onwe ya nwere ike inye anyị ezumike, olileanya na udo.
Gịnị bụ nkasi obi pụrụ iche nke onye amụma natara na mkpughe a? Jehova gwara ya na ya onwe ya juputara n'ọṅụ na obi ụtọ. Ọ dịghị anọdụ ala dị ka Buddha, na-amụmụ ọnụ ache ma na-agbaghasị ahụhụ ndị mmadụ na-enweghị na-elekọta ha. Chineke anyi juputara na obi uto na obi uto. O mepụtara atụmatụ nke mgbapụta maka mmadụ niile. Onye maara ihe maara na ọ dịghị onye na-eme ihe ọma, na mmadụ nile emebiwo, na ọ dịghị onye nwere ike ịkwụ ụgwọ onwe ya ma ọ bụ jupụta na ihe efu nke obi ya na udo na ọṅụ. Jehova choro ime ka ndimmehie megharia ma nye kwa iheo ma na olileanya ha di. Echefula na ọṅụ dị ebube nke Chineke bụ ike gị! Onye cheghariri nye Ya nata site n'aka Ya ike, nkasi obi na obiike. Naanị Jehova na-eweta enyemaka - ala-eze Ya dị nso.
A mụọ Onye Mgbapụta
N'abalị ahụ, ìhè na-egbukepụ n'elu ugwu nta nke Betlehem, mgbe mmụọ ozi nke Jehova pụtara ìhè n'ebube Ya n'ihu ndị ọzụzụ atụrụ ndị na-elekọta atụrụ ha. Ha we da n'ala, tua egwu, mb͕e ìhè nke elu-igwe nēnwuru ha buruburu. Ha chere na Ụbọchị Ikpe ga-abịa n'enweghị ọkwa. Ha tiri egwu nke ukwuu, n'ihi na mmehie ndị ha mere n'oge ochie tetara ma bịa n'ihu ha. Ha choro igbanari ikpeah, ma ha enweghi ike n'ihi na ebube nke Jehova turu ha.
Mmụọ ozi ahụ nke pụtara ìhè nye ha anaghị akatọ ma ọ bụ mee ka ụjọ jide ha, kama gbara ha ume, "Unu atụla egwu: n'ihi na lee, ana m ezitere unu ozi ọma, oké ọṅụ nke ga-adịrị mmadụ niile. N'ihi na amuwo gi ta ta n'obodo Devid onye nzoputa, onye bu Kraist Onye nwe ayi‖ (Luk 2:8-11).
N'elu ọdịdị dị ukwuu, mmụọ ozi nke Jehova kpughere afọ ọhụrụ, oge ọṅụ na amara. Atụmatụ nke mgbapụta nke Chineke na-eme ka ọ bụrụ eziokwu. Mmụọ ozi ahụ gwara mmadụ niile ka ha gụọ ma nweta ọṅụ na udo nke sitere na Chineke. Jehova emegheghi amara Ya nye ndi ezi omume na ndi ezi omume, kamakwa nye ndi ojo na ndi ajo omume. Mmụọ ozi ahụ ezigaghị ndị ọkà mmụta na ndị maara ihe òkù mbụ, ma ndị na-agụghị akwụkwọ na ndị na-amaghị na ihe ọmụma nke Jehova kwesịrị ịkụziri ha. Ihe ùgwù a pụrụ iche abụghị naanị ụmụ nwoke, kamakwa nye ụmụ nwanyị na ụmụaka, nakwa maka ndị ike gwụrụ na ndị na-arịa ọrịa. E wetara ha niile ọṅụ nke Jehova. Gịnị mere mmụọ ozi nke Jehova ji nye iwu ka mmadụ nile ṅụrịa ọṅụ? Nihi na amuwo onye nzoputa ya ma malite oru ebere ya.
Nke ka nke bu ihe kariri, ihe ka otutu n'ime ndi ya choro Onyeisi Udo. Ha adighi njikere igbanwe uche ha. Nzube ha bụ ike, ego na ụkpụrụ dị elu. Ha chọrọ iji ngwá agha na-egbu egbu merie ndị iro ha ma nweta ọchịchị mmeri ha.
Onyinye dị ukwuu nke Kraịst
Kama, Kraist chịkọtara onye chegharịrịnụ na onye nhụsianya nke chigharịkwuru Chineke. Ọ gwọrọ ndị ọrịa na-abịakwute Ya, gbaghara ha mmehie nile ha, chụpụ ndị nwere mmụọ ọjọọ, mee ka oké ifufe ahụ kwụsị, mee ka ndị gere Ya ntị na-ege ntị ma kwenye ha, "Ihe ndị a ka m gwaworo gị, ka ọṅụ m wee dịrị na unu, ka ọṅụ unu wee ju" (Jọn 15:11, 16:24).
Kraist kwadoro ihe nzuzo a nke Chineke n'ekpere ekpere ya, na-ekwupụta na ọṅụ nke Ya nwere ike ịdị na-adị n'ime ndị ya hụrụ n'anya (Jọn 17:13).
Nwa nke Meri enyeghi ndi neso uzo ya nani, kama ndi ozo na ndi iro ya. O wepuuru mmehie ha na mmejọ ha wee kpuchie ajọ omume ha. Site na onyinye nke Kraist, Kraist mere ka ya na Onye Nsọ di n'udo; ya mere Kraịst nwere ikike ịgbaghara mmejọ nke ndị nabatara ezi omume Ya site na amara na ịtọlite olileanya ebighị ebi n'ime ha
Mgbe Nwa nke Meri e mere ka o si n'ọnwụ bilie rigoro Chineke mmeri, Ọ wụkwasịrị Mmụọ Nsọ n'ahụ anụ ahụ niile (Ọrụ 2:16-21). Onye ọ bụla nke na-echegharị mmehie ya ma dịrị n'otu na okwukwe na Kraịst, ga-anata Mmụọ nke ịhụnanya, ọṅụ na udo na ogologo ntachi obi na njide onwe onye (Ndị Galeshia 5:22-23). Nmalite malitere n 'ndu ndi kwere ekwe, site na ndu ha site na Mo nke Chineke. A ga-akasi ndị na-eru uju obi, ndị na-achọsi ike ga-enweta olile anya, ihe ọjọọ ga-abụ ndị ezi omume, ndị na-aga ije ọnwụ ga-adị ndụ nke ike ndụ ebighị ebi. Site na mgbe Kraist mere ka ayi na Chineke di n'udo, Ngwọta Ya na nchacha nke oma ka ndi mmadu ji otutu ihe na obi oma rute mmadu.
Site na ahụmahụ ime mmụọ ya, Pọl onyeozi dere, "Na-aṅụrịnụ ọṅụ n'ime Onyenwe anyị mgbe niile. Ọzọ, m na-asị, ṅụrịrị ọṅụ!" (Ndị Filipaị 4:4).
Ọṅụ nke Chineke na-anọgide n'ime onye ọ bụla nke na-elekwasị anya n'ịhụnanya Ya, na-agụ okwu Ya ma na-edebe ha. Kraist gbara ha ume ma me ka ndi neso uzo ya kwue, "Ṅu onu! Nihi na edewo aha gi n'elu igwe" (Luk 10:20).
ị na-ebi ebe owu na-ama, furu efu ma ọ bụ ihe ọ bụla? Ka ị na-anọgide na Kraịst dị ndụ? Onye nedogidere nwa nke Meri gaewe ike na ọṅụ Ya. Nyefe onwe gi nye Kraist, obi uto ebighi ebi ga-ebi n'ime obi gi n'etiti uwa a na-ekweghi na Chineke ya na ule na mkpagbu ya.
Ùnu eguzobere n'ọṅụ nke Jehova? Anyị dị njikere iji zitere gị Oziọma Kraịst, tinyere ntụgharị uche, ka ị wee nwee ike ịhụ na isi iyi nke ume Chineke na-enye ume ọhụrụ. Na-agụ akwukwu nso ma na-ekpe ekpere kwa ụbọchị, ka Jehova wee nwee ike iduzi gị n'okporo ụzọ nke ezi omume Ya.
Soro ndị enyi gị kwupụta ọṅụ Jehova: Ọ bụrụ na ị nwere mmasị akwụkwọ akụkọ a ma chọọ inye ya ndị na-achọsi ike ma na-akpafu, anyị ga-enwe obi ụtọ iziga gị ụfọdụ akwụkwọ iji nyefee gị. Kpee ekpere maka ndị nabata akwụkwọ akụkọ a.
Anyị na-echere akwụkwọ ozi gị. Echefula ide ederede zuru oke gi. Anyị na-ekpe ekpere na ọṅụ Jehova ga-ejupụta gị.
Page last modified on October 01, 2018, at 02:39 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)